Farmaajo oo raadinaya xalka dhibaato uu qeyb ka yahay | KEYDMEDIA ONLINE
Farmaajo oo raadinaya xalka dhibaato uu qeyb ka yahay
Maamulka Farmaajo ayaa noqday midkii ugu musuq-maasuqa badnaa ee soo maraya Soomaaliya mudo tobanaan sano ah.
MUQDISHO, Soomaaliya - Madaxweynaha mudo-xileedkiisu dhamaadey ee Soomaaliya Maxamed C/llaahi Farmaajo ayaa qaadey tallaabo uu olole doorasho ka dhiganaya maadaama uu raadinaya mar labaad xilka ugu sareeya dalka.
Wuxuu daah-furay gudiga la dagaalanka musuq-maasuq, isagoo sidoo kale Maanta oo ku beegan 14-ka August u aqoonsadey maalin la dagaalanka Musuq-maasuqa Soomaaliya.
"MD Farmaajo ayaa u asteeyey 14-ka bisha Ogoosto Maalinta La dagaallanka Musuq-maasuqa ee Soomaaliya, Si loo xoojiyo dadaallada ciribtirka Musuq-Maasuqa, loogana miro dhalliyo hiigsiga Qaran ee ku aaddan dal daahfuran oo ku tilmaaman Maamul-wanaag," ayaa lagu yiri qoraal Villa Somalia soo saartay.
Musuq-maasuqa Soomaaliya heerkii ugu hooseysay ayuu gaarey mudadii uu Farmaajo Madaxweynaha ka ahaa dalka, iyadoo xilalka dowladda ugu muhiimsan u magacaabey dad kasoo jeeda Beesha uu ka dhashay.
Shacabka Soomaaliyeed ayaa ka aamin-baxay maamulka Farmaajo, oo ku caanbaxay qabyaaladda, nin-jeclaysiga, caburinta saxaafadda madaxa-banaan iyo siyaasiyiinta ka fekerka duwan, waxaana ku maqan kumanaan dhalinyaro ah oo loo diray dagaalka Itoobiya.
Farmaajo waxuu sidoo kale isku dayay inuu dalka afgembi ku qabsado, kadib markii uu mudo-kordhin labo sano sameystay April 2021, iyadoo aan ogoleyna dastuurka iyo sharciga dalka.